Linus Torvalds inotaura nezve kukosha kwekudzidziswa muLinux | Linux Vakapindwa muropa
Linus Torvalds, iye musiki, ataura mune yeLinux Foundation vhidhiyo pamikana inopihwa neLinux uye yakavhurwa sosi software. Kubva zvaaive mudzidzi muma80s kusvika atanga kuvhura Linux kumashure muna 1991, iye Finn haana kumira pabasa rake semubati wekernel uye mukuonekwa kwake kwakawanda kumisangano uye zvimwe zviitiko zvine chekuita nekusika kwake kana software yeOpen Source.
Nhasi nhaka yake yese yashandurwa mumikana mizhinji kune vamwe vashandi mukomputa, vakaona mutsinga wakakura mune ino kernel nenzvimbo yayo yese, pamwe nezvimwe zvinonakidza open open source mapurojekiti uye pasina izvo nhasi zvatisingakwanise kuitika. . Saka Linus Torvalds anodada nezvaakasika uye akataura nezve mikana iyo kuziva nezve ino nyika inopa kuti uwane basa kana kusimudzira chinzvimbo chako chebasa.
Iwe unogona kuona iyo vhidhiyo pamitsara iyi, inotaura nezve mikana iyo yainopa Linux uye yakavhurwa sosi asi kwete chete padanho rehunyanzvi, asi zvisina kunangana. Izvo zvakare zvinotanga nekuongorora kuti rakakura sei uye rakakosha sei Linux rave, sezvo iri renji kubva kumakina mahombe senge makomputa, kune nharembozha kana maTV senge atinoshandisa nhasi. Uye ikozvino neIOT mikana yakawanda uye yakawanda yakavhurika.
Isu tatove tataura pane ino blog kuti Linux inogadzira sei basa, kuziva nezvazvo kunogona kukubatsira iwe kuwana basa kana kugadzirisa rako chinzvimbo chebasa. Munguva dzenjodzi uye pakanga paine kushaikwa kwemabasa, chikamu chehunyanzvi, kunyanya icho chine hukama neLinux, chaida vashandi vanokwanisa kuti vashande. Naizvozvo haisi zano rakaipa kudzidza nezvenyaya yacho, sezvo ichizarura mikova kwauri. Zvakare kugadzira yakavhurwa sosi mapurojekiti kana kushanda pamwe navo pane saiti senge GitHub, nezvimwe, zvinogona kushanda se "ruzivo" urwo makambani anokoshesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Linus Torvalds inotaura nezve mikana yeLinux
mukana chete weCHOKWADI muLinux ndeyekuchengetedza marezinesi.
Kunyangwe iwe uchizvida kana kwete, Linux haimire kuve UNIX, kuti kana ichivandudzwa uye nebhenefiti yekuti Kristu wese anogona kuita chero zvaari, ndicho chikonzero chaicho, asi hachiregi KUVA KOPI YAUNIX
Hechino chinongedzo kune vhidhiyo:
Vanotadza kusvika pakuona kwavo kweLINUX. Kunyanya zvakadaro neGNU. Linus anokwanisa kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi, asi zvakadaro haatsanangure kunaka kweakavhurika sosi.
Pfungwa dzakamanikana sei ...
Chalet OS: yazvino uye minimalist Linux kugovera